पाँचसय वर्ष पुरानो गणेश भगवनको मुर्ति फेला परेपछि यस्तो! बेवास्ता नगर्नुहोला! – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > पाँचसय वर्ष पुरानो गणेश भगवनको मुर्ति फेला परेपछि यस्तो! बेवास्ता नगर्नुहोला!
admin November 5, 2020 November 5, 2020 धर्म सँस्कृति	0
काठमाडौं बाङ्गेमुढास्थित ओलाछी टोलमा रहेको गणेश मन्दिर पुन निमार्णका क्रममा पुरानो ढुङ्गाको गणेशको मूर्ति फेला परेको छ । मन्दिर पूनर्निर्माणका क्रममा पित्तलको गणेशको मुर्ति उप्काउंदा पछाडि ढुगांको करिब पाँच सय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला परेको हो । असावधानीका कारण उक्त मूर्ति भने टुक्रिएको छ । टुक्रिएको मूर्ति पुरातत्व विभागको सहयोगमा जोड्न लागेको स्थानीय कृष्णप्रसाद मानन्धरले बताए ।
आइतबार – पुरुष : आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ ।
स्त्री : आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । सोमबारः पुरुष स् सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ ।
आफ्नै भाउजु भगाएका श्रीमान य’स्तो अ’वस्थामा भेटिए, ९ बर्षपछि पर्यो ठुलै ल’फडा… (भिडियो हेर्नुस्)
साउनको पहिलो सोमबार, दर्शनार्थीका लागि पशुपति नाथ मन्दिर!
महिलाले विहानै उठेर यस्ता काम गर्दा चम्किन्छ भाग्य! हेर्नुहाेस र सबैका लागि शेयर पनि गर्नुहाेस्